iOS 7 dia mandrindra ny fifandraisana amin'i Google indray | Vaovao IPhone
Tamin'ny fahatongavan'i iOS 7, sitrana very iray tao amin'ny iOS efa ho herintaona lasa izay. Tamin'ny volana septambra lasa teo dia nanambara i Google fa nandao ny Exchange ActiveSync, izay nahatonga ny mpampiasa GMail very ny mailaka Push tao amin'ny iOS, ary koa ny fahaizana mandrindra ny fifandraisanay sy ny kalandrie ampiasain'io Protocol io. Na dia nisy aza ny mety ataovy hatrany amin'ny fampiasana CardDAV sy CalDAV, dia fomba tsy fantatra ho an'ny maro, izay nisafidy mifamadiha amin'ny serivisy natolotry ny iCloud mampifandray sy mamerina ny fifandraisana. Ny iOS 7 dia nanova an'ity indray, ary azo atao indray ny mampifandray ireo fifandraisana eo amin'ny kaonty Google anay ary ny fitaovantsika rehefa manangana kaonty GMail amin'ny mailaka.
Mora tokoa ny manao azy. Mila miditra amin'ny rafitry ny System fotsiny ianao ary misafidy ny safidy hanampy kaonty mailaka. Misafidy «GMail» izahay ary mampiditra ny angon-drakitra fidirana aminay amin'ny kaonty GMail izay tianay hamboarina. Raha vao voamarina ny angon-drakitra, dia hiseho ireo safidy samihafa hampandeha na hanafoana ny fampifanarahana azy. Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny safidin'ny Contacts, ny fiovana rehetra ataontsika amin'ny fitaovantsika na amin'ny kaonty GMail dia ho hita taratra eo amin'ny fitaovantsika rehetra namboarina niaraka tamin'io kaonty io.
Raha manana kaonty marobe miaraka amin'ny Contact isika, dia hiseho mifangaro ao amin'ny Contenda Agenda ireo rehetra ireo. Mba hisorohana an'izany, ny azontsika atao dia tsindrio ny safidy "Groups" (eo amin'ny zoro ankavia ambony amin'ny Agenda) ary safidio izay vondrona tadiavintsika ho hita ary iza amin'ireo no tsy hitantsika. Halavirintsika noho izany ny mahita ireo fifandraisana misy dika mitovy. Aza adino koa fa zava-dehibe ny tsy maintsy fisafidianana ny kaonty tianao hapetrakao ho default ho an'ny fifandraisana ao amin'ny "Fikirana> Mail, ny fifandraisana, ny kalandrie" ny kaonty izay anampiana azy ireo ho lasa default.
Fanazavana fanampiny - Ampifanaraho amin'ny Google ny fifandraisana sy ny kalandrie, Alefaso amin'ny iCloud ny fifandraisana GMail anao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ny iOS 7 dia mandrindra ny fifandraisana amin'i Google indray